WEEJIDOW | Wang Mayaagey | Baal 160
War deg deg ah: Qarax culus oo lala beegsadey Gudiga Abaaraha iyo Askari Jabuutian ah oo lagu diley Degmada Buleburte ee gobolka Hiiraan
Abriil 19, 2017
WAAJIDPRESS – 19 APR 2017:
Kolonyo ay la socdeen xubno ka tirsan Guddiga Gurmadka Abaaraha, ayaa barqanimadii maanta waxaa qarax miino lagula eegtay duleedka Magaalada Muqdisho.
Xubnahan oo ka amba baxay Magaalada Muqdisho, kuna sii jeeday Deegaanka Garasbaaley oo ku yaala wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye, ayaa waxaa uu qaraxu ku haleelay agagaarka Garasbaaley.
Gudoomiyaha Guddiga Gurmadka Abaaraha, Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, ayaa xaqiijiyay in qaraxu uu qabsaday mid ka mid ah gawaaridii ay la socdeen xubnahaasi, ha yeeshee aysan jirin cid wax ku noqotay qaraxaasi.
“Gaari ay saarnaayeen Agaasime-yaal Gobolka Banaadir ka tirsan iyo Guddiga Gurmadka Abaaraha ayuu qaraxa haleelay. Ma jirto cid wax ku noqotay, marka laga reebo in gaariga uu ku burburay.” Ayuu yiri Sheekh Nuur Baaruud Gurxan.
Goobjooge ayaa xaqiijiyay in qaraxan uu qabsaday gaari uu noociisu yahay HILUX, balse sida uu sheegay aanu arkin cid wax ku noqotay, aan ka ahayn burbur gaariga ka soo gaaray qaraxaasi.
“Qaraxa wuxuu ahaa mid aad u xoogan, waxaana isugu soo baxnay meeshii uu ka dhacay. Waxaan aragnay Xaajiyad HILUX ah oo qaraxa ku burburtay, cid kale oo wax ku noqotay ma’arkin.”
C/raxmaan Axmed Cali (C/raxmaan Garyare), Gudoomiyaha Deegaanka Garasbaaley, ayaa sheegay in Guddiga Gurmadka Abaaraha ay Garasbaaley ugu soo amba baxeen, sidii ay qiimayn ugu samayn lahaayen qoysaska barakacayaasha ee halkaasi ku nool, si maalmaha ina soo aadan ay deeq raashiin u soo gaarsiiyan.
Dhinaca kale, isla maanta, Askari ka tirsanaa Ciidanka Militariga Jabuuti ee qaybta ka ah Xoogaga Nabad Ilaalinta Midowga Afrika, ayaa duhurnimadii maanta lagu dilay toogasho ka dhacday Degmada Buulaburde ee Gobolka Hiiraan.
Askarigan oo ku sii jeeday Xerada Ciidanka Jabuuti ku leeyihiin Galbeedka Buulaburde, ayaa waxaa si gaadmo ah ku toogtay rag bistoolado ku hubeysnaa.
Ciidanka Jabuuti, ayaa falkaasi ka dib isu ballaariyay goobtii lagu dilay askariga, waxayna ka sameeyen hawlgal ay tiro dad ahi ku soo qab qabteen.
Dadka la soo qab qabtay oo ka ag-dhawaa halka uu dilku ka dhacay, ayaa waxaa ku jira nin la sheegay in uu hubeysnaa, waxaana lala xiriirinaya dilka askarigaasi.
Dowladda Jabuuti, ayaa waxay xaqiijisay in mid ka mid ah askarteeda lagu dilay Degmada Buulaburde, isla-markaana ay dilkiisa u hayaan nin hubeysan.
Buulaburde, ayaa waxaa la’isla dhex marayaa in ay macquul tahay in dadka dilka askariga loo soo qabtay loo wareejiyo Xerada Ciidanka Jabuuti ku leeyihiin Magaalada Baledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan.
DAAWO: DOOD KULUL OO KU SAABSAN XAGEE AYUU KU DAMBEEYEY ISBEDEL DOONKII LAGU RIDEY DOWLADII XASSAN SHEEKH
WAAJIDPRESS – 18 APRIL 2017;
DAAWO: SHEIKH MAALIN ILYAAS OO KA SHEEKEYNAYA TAARIIKHDIISA UU QUR’AANKA KARIIMKA KU SOO BARTEY
DAAWO Barnaamij: SIDA AY FARMAAJO IYO KHAYRE UGU GAFEEN GUDOOMIYE JAWAARI IYO QOWMIYADDA DIGIL IYO MIRIFLE
Abriil 18, 2017
WAAJIDPRESS – 18 APRIL 2017:
War deg deg ah: Nabadoon caawa lagu diley Magaalada Baledweyne ee gobolka Hiiraan
Nin Nabadoon ahaa, ayaa waxaa caawa lagu dilay xaafadda Hawlwadaag ee Magaalada Baledweyne ee Gobolka Hiiraan.
ALLAHA U NAXARIISTO, Nabadoonka oo lagu magacaabi jiray Mustaf Maxamed Dhicisow, ayaa waxaa dilay laba nin oo bistoolado ku hubeysnaa, waxaana uu dilkiisu ka dhacay agagaarka Suuqa Xoolaha Baledweyne ee gobolka HIIRAAN.
Ragga dilka gaystay oo lala xiriirinayo Ururka Al Shabaab, ayaa waxaa dilka ka dib u suurta-gashay in ay ka cararan goobtii ay falka ka gaysteen.
Ciidamada Dowladda, ayaa daqiiqado ka dib soo gaaray halka uu dilku ka dhacay, waxayna ka bilaabeen baaritaan ku aadan kuwii dilka gaystay.
Goobjooge, ayaa sheegay in Ciidamada Dowladdu ay halkaasi soo gaareen, xilli ay baxsadeen raggii Nabadoonka qaarajiyay.
Nabadoon Mustaf Maxamed Dhicisow, ayaa ka mid ahaa Ergadii Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya ku soo dooratay Magaalada Jowhar.
Ururka Al Shabaab, ayaa labadii bilood ee ugu dambeysay kordhiyay beegsiga ay ku hayaan Ergada soo dooratay Xildhibaanada Labada Aqal ee Baarlamaanka
DAAWO OO KA FAA’IDEYSO: HADDII AY MURUG AMA KURBO KU QABATO AKHRISO DUCADAAN
WAAJIDPRESS – 18 APR 2017:
War deg deg ah: Madaafiic galabta lagu garaacay Magaalada Muqdisho
Dhawr xabo oo hoobiye-yaal ahaa, ayaa gelinkii dambe ee maanta lagu garaacay Magaalada Muqdisho, iyadoona jugtoodu laga maqlay xaafado badan oo Caasimadda ku yaala.
Hoobiye-yaashan oo aan weli la garanayn halka laga soo tuuray, ayaan sidoo kale la aqoon halka uu bartilmaameydkoodu ahaa.
Hoobiye, ayaa galabta ku soo dhacay iskuul ka soo horjeedka Xarunta Degmada Hawlwadaag, xilli ay ardaydu qaadaneysay xiisadaha ka baxa iskuulkaasi, waxaana la xaqiijiyay in hal arday ku dhintay, halka saddex kalana ay ku dhaawacantey.
Hoobiye kale, ayaa ku soo dhacay xaafadda Tokyo ee Degmada Hawlwadaag, iyadoo uu ku dhintay nin dhalinyaro ahaa, halka laba kalana ay ku dhaawacantay.
Madaafiicda kale ee lagu garaacay magaalada, ayaan faah faahin laga hayn goobaha kale ee ay ku dhaceen, saacadaha soo socda ayaa la fillayaa in faah faahintooda la helo.
Axadii, ayay ahayd markii Degmada Wadajir lagu toogtay laba ka mid ah maleeshiyada Al Shabaab, oo tuureysay madaafiic lagu weeraray dhinaca Garoonka Aadan Cadde.
Shabaab, ayaa inta badan sheegta masuuliyadda weerarada lagu carqaladeynayo xasiloonida Magaalada Muqdisho.
War deg deg ah: Heshiiskii Somaliland iyo Shirkada Turkish Air oo Hal arin oo yaab leh ku heshiin waayey
Abriil 17, 2017
WAAJIDPRESS – 17 APRIL 2017:
Wafti ka socday shirkadda duulimaadka Turkish Airlines oo shalay magaalada Hargeysa booqday ayaa waxay la kulmeen wasiirka duulista hawada maamulkaasi Farxaan Aadan Heybe iyagoo ka wada hadlay suuragalnimada in shirkadda Turkish ay duulimaad ka bilowdo garoonka Hargeysa iyo dib u dhis lagu sameeyo garoonka oo terminal casri ah yeesho.
Wada hadaladaasi ayaa qaar la isku afgartay halka qaar kale dib loogu balamay in lasii amba qaado, waxaana ka mid ah in duulimaadka diyaaraddii ka tagta Hargeysa aysan sii mari doonin Muqdisho, tan ka Xamar ka timaadana aysan soo mari karin Hargeysa, qodobkaasi oo dib u dhigay in Turkish Airlines ka howl bilowdo Hargeysa.
Wasiirka ayaa sheegay in ay usoo bandhigeen maamulka shirkadda Turkish Airlines in duulimaadka tooska uu noqdo Istanbul, Jabuuti to Hargeysa, Hargeysa, Jabuuti to Istanbul.
DAAWO: KU SIMAHA MADAXWEYNAHA KOONFUR GALBEED OO LA SHIREY GUDIGA ABAARAHA DEEGAANADA KOONFUR GALBEED
WAAJIDPRESS – 17 APR 2017:
Akhriso then DAAWO: WAR MURTIYEED AY ISLA GAAREEN DOWLADA IYO MAAMUL GOBOLEEDYADA
Waxaa maanta Madaxtooyadda Somaliya lagu soo gaba gabeyay shirkii u socday Madaxda dowladda Federalka Somaliya iyo Madaxda Maamul Goboledyada dalka ka jira.
Shirkaasi ayaa waxaa laga soo saaray Warmurtiyeed ay isla garteen Madaxda dowladda iyo madaxda Maamul Goboledyada dalka jira, waxaana Saxaafadda u akhriyay Agaasimaha dhanka Warfaafinta Madaxtooyada Cabdi Nuur.
Ugu horeyn Madaxda dowladda iyo Madaxda Maamul Goboledyada ayaa bogaadiyay kaalinta shacabka Somaliyed ay kaga jiraan gurmadka abaaraha ka taagan Gobolada dalka Somaliya, iyadoo madaxda ay sheegeen inay muhiim tahay in la sameeyo qorshe cad oo looga hortagaayo abaaraha soo noq noqday.
Madaxda dowladda iyo kuwa Maamul Goboledyada waxa kale oo ay isla garteen in la dhiso Gole amni oo ay yeeshaan Dowlad Goboledyada, Golahaasi oo ay hogaamin doonaan Madaxda Mamul Goboledyada dalka ka jira.